UMkhandlu uthi uzobambisana nozime wendawo ezinhlelweni zentsha – Ubukhosi
Home/ Umkhandlu/UMkhandlu uthi uzobambisana nozime wendawo ezinhlelweni zentsha
Ubukhosi News May 21, 2018
IMeya uMncwango noNoxolo Ndebele
IMeya nozime bayavumelana ngesidingo sokubambisana ekuthuthukiseni intsha yendawo
Ukuqokwa kwentokazi yendawo sekudale injabulo nokuziqhenya kubantu noMkhandlu uNongoma. UNoxolo Ndebele wasesigodini uNdindindi oSuthu uhlungwe kwabaningi waqokwa ukuba abe ngomunye kwaba li-12 ongenele owamanqamu kaMiss South Africa 2018.
Omunye walabo abaziqhenyayo ngale ntokazi yiMeya uMnu u-Albert Mncwango nothe okwenziwe nguNoxolo kubeka uNongoma endaweni enhle nxa kufika kwezokuvakasha.
Khona lapho uthe umhlangano abe nawo nale ntokazi umenze wayibona isifanele isibili esokuba nguMiss South Africa.
“NgoLwesithathu ngibe nomhlangano okhethekile noNoxolo kanye nabazali bakhe uMfundisi uNdebele noMama uNdebele. Ngithathekile yindlela le ngane yethu ethobeke ngayo nangendlela ezinikela ngayo ukuba yingxenye yokwakha le ndawo yethu. Yebo isencane kepha amaphupho ayo aphusile futhi adingwa ukwesekwa. Isifanele nesokuba nguMiss South Africa ngoba iyakwazi ekufunayo empilweni,” kusho uMncwango.
Kulo mhlangano lapho uMncwango obephahlwe yiSekela Meya iKhansela uNokubekezela Xulu, uSomlomo, ikhansela uBhekinkosi Zulu kanye neMeneja uNkk uThandeka Sokhela kuvele ukuthi uMkhandlu unesifiso sokusebenzisana nale ntokazi ezinhlelweni ikakhulukazi ezihambisana nalezo ihhovisi leMeya elizenzayo emphakathini.
“Sithande kakhulu ukucabanga kwakhe nokwenze samumema ekutheni abe yingxenye yezinhlelo zokuthuthukisa intsha endaweni. Ukujabulele lokhu futhi siyamukela ukuthi uzoba matasa kepha sikuthokozele ukuzibophezela kwakhe ekutheni uzoyidudula nathi lapho sihlelembela intsha yakwaNongoma enamakhono amangalisayo edinga nje kuphela ukucijwa nokuxhaswa ngezindlela ezahlukene,” kusho uMncwango.
IMeya ithe ziningi izinhlelo njengoMkhandlu abeza nazo ngonyaka ozoqala wezimali nayilapho bezosebenzisana netsha esiphumelele evela kwaNongoma ngenhloso yokuthi icije labo abeza ngemuva.
“Njengoba bengihamba ngenza izethulo kubantu bakwaNongoma ngikhulumile nanalabo abazalelwa kule ndawo yakithi kepha ngenxa yamatoho asebesebenza kwezinye izindawo. Inhloso lapha bekuwukubamema ukuba bazosiphathisa, babuye basilekelele ekuthuthukiseni uNongoma wethu sonke. UNoxolo nje uzoba yingxenye yohlelo olubanzi oluhlanganisa abantu bakwaNongoma, abadala nabancane. Abanye babo bangosomabhizinisi, izifundiswa, izisebenzi zikahulumeni, abefundisi, abezemindlao njalo njalo,” kuchaza uMncwango.
Uphethe ngokuthi lolu hlelo luzobekelwa umphakathi ngoLwesine oluzayo njengoba ezobe ehlangene nosomabhizinisi bendawo nathe njengoNoxolo ‘bangamanxusa kaNongoma nokumele baqale babambisane ukuze iHlalankosi liqhubeke nokuzakha nokuzenzela’.
Baningi abakwazi ukuphunyukela eMome ngesikhathi sempi
Sebekhale kuMphathiswa abaseNdumeni ngezindlu
Usizi, ubungozi, ubugebengu kudlangile ezakhiweni ‘ezathunjwa’
UMasipala ukhomba iso loMnyango olivikelayo
Sekuya ngamagama enkehli kuMasipala iNkandla nezikole zendawo